Voan’ny Coronavirus Nodimandry i Manu Dibango | NewsMada
Voan’ny Coronavirus Nodimandry i Manu Dibango
Par Taratra sur 25/03/2020
Taorian’i Aurlus Mabélé, fantatra koa izao fa nodimandry i Manu Dibango. Nalaza maneran-tany amin’ny fiangaliana saksofona izy…
Ny 18 marsa teo, niely nanerana ny tambajotra sosialy maro fa marary i « Papa Manu » na i « Le Doyen », hoy ny sasany, fa i Manu Dibango ny tena ahafantaran’izao tontolo izao azy. Araka ny vaovao nampitain’ireo tambajotra ireo ihany, nodimandry omaly teo amin’ny faha-68 taony ity mpitsoka saksofona malaza eran-tany ity. Voalaza tamin’izany fa ny tsimokaretina Covid-19 no niteraka izao fahafatesany izao. Marihina fa iray amin’ireo mpitsoka zavamaneno avy aty Afrika, zokiny indrindra monina any Frantsa, i Papa Manu. Raha ny vaovao niely omaly hatrany, ny fianakaviana faran’izay akaiky azy ihany no hanatontosa ny fandevenana
Nivoy ny Soul Makoussa
Raha tsiahivina, teraka ny 12 desambra 1933 tao Douala, Cameroun, i Manu Dibango. Taorian’ny fianarana nataony tao amin’ny kolejy Saint-Calais, nianatra tao amin’ny lycée Chartres izy ka iray amin’ireo nampianatra azy tao ihany ny nampianatra azy nitendry piano. Taona 1962, nipetraka tany Léopoldville (Kinshasa) izy mivady ka nanangana ny trano famokarana kapila nampitondrainy ny anarana Tam-Tam. Ny fotoana fohy nandalovany tany Cameroun anefa, efa nahafahany nanangana Tam-Tam faharoa indray.
Taorian’io, niverina tany Frantsa i Dibango ka niaraka niasa tamin-dry Dick Rivers sy ry Nino Ferrer. Nivoaka ny « album » voalohany « O Boso » ny taona 1972 fa ny « Soul Makoussa » no tena nanome fiaingana vaovao indray ho an’i Manu Dibango teo amin’ny sehatry ny zavakanto.